‘माल्टा – नेपाल फ्रेण्डसीप सोसाइटी’ गठन, राजदूत सुवेदी संरक्षक – News Portal of Global Nepali
‘माल्टा – नेपाल फ्रेण्डसीप सोसाइटी’ गठन, राजदूत सुवेदी संरक्षक
लन्डन । बेलायत तथा माल्टाका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको विशेष उपस्थितिमा ‘माल्टा नेपाल फ्रेण्डसीप सोसाइटी’ गठन भएको छ ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार, सोसाइटीको संरक्षकमा राजदूत डा. सुवेदी छन् भने अध्यक्षमा भ्यालेट्टास्थित मजाइडा नगरपालिकाकी मेयर श्रीमति मार्गरेट बलडाचिनो र उपाध्यक्षहरुमा डा. भिक्टोर बुजिया, टोमस मिकालुस्कस, साइमन अल्डेन र सोम सापकोटा चुनिएका छन् । त्यसैगरि, महासचिवमा डा. जोसेप क्यालेजा, सचिव एवं प्रवक्तामा मार्को क्रेमोना र कोषाध्यक्षमा डा. भिभियना प्रेमाजी छानिएको जनाइएको छ ।
राजदूत डा. सुवेदीले माल्टाको राजधानी भ्यालेट्टामा शुक्रबार आयोजित एक समारोहबीच सोसाइटी गठनको घोषणा गरेका थिए ।
सदस्यहरुमा काउन्सिलर मरिस एगुस, काउन्सिलर अल्फ्रेड फारुग्जा, काउन्सिलर जुडी स्काइबरस, काउन्सिलर अलेक्सजेण्डर जमिट, डा. निकोलस चाल्स, डा. बेन्जामिन मिकालेफ, जोनाथन बोनिक्ट, रोनाल्ड वेज, निकोलस क्यालिगरी, स्टिभ मर्सिसा, ओलेग जाकोलीभ, सुरिस क्लाभिल्स, राजु अर्याल र चेतबहादुर केसी छानिएका छन् ।
राजदूत डा. सुवेदीले नवगठित सोसाइटीले नेपाल र माल्टा एवं नेपाली र माल्टावासी समुदायबीच सम्बन्ध अभिवृद्धिका लागि पुलका रुपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राजदूतले सोसाइटीलाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै नेपाल सुरक्षित, शान्त र सुन्दर विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रहेकोबारे प्रचार प्रसार गर्न पनि अनुरोध गरे ।
१४६३९	पटक पढिएको
१०५०४	पटक पढिएको
८८३१	पटक पढिएको